Ngaba amagqabantshintshi alinganayo? | Martech Zone
NgoLwesibini, Oktobha 14, 2008 Lwesine, Okthobha 3, 2019 Douglas Karr
Ndenze uhlalutyo lwebhlog yam kule mpelaveki ukukhangela unxibelelwano phakathi kweziphumo ze-injini yokukhangela, ezona zithuba zam zebhlog zithandwa kakhulu, izithuba ezinezona zimvo, kunye nezithuba ezibangele ingeniso ngenxa yokubonisana okanye ukuthetha.
Ukujonga ezona zithuba zam zidumileyo, uya kufumana ifom yoQhakamshelwano kwiWordPress, iHuntington Bank Sucks, ndiyishiyile iBasecamp, kwaye ubude beDilesi ye-imeyile buphethe ezona zithuthi. Ezo zithuba zikhokelela kwindlela yeZiphumo zeNjini yokukhangela. Ezo zithuba zikwanazo nezona zimvo zininzi. Nangona kunjalo, ezo zithuba zibonelele ngokukhohlisa kweedola (kunye neekomityi zekofu) epokothweni yam.
I-IMHO, ukusebenzisa izimvo njengowona mlinganiselo wempumelelo kuyinto eqhelekileyo, kodwa kukhokelela kwi Uninzi lweeblogi ezihlanganayo ziyahluleka.
Phantse i-1 kuzo zonke iindwendwe ezingama-200 ziza kubhlog yam kwaye ishiya amagqabantshintshi. Ipesenteji encinci yezo zinoburharha, uninzi ngabantu endinolwalamano nabo… kwaye bambalwa kakhulu, ukuba bakhona, endenza nabo ushishino. Ngapha koko, enye yeekhontrakthi zam ezinkulu kulo nyaka uphelileyo zazivela kwisithuba esibonisa ubuchule bam kwitekhnoloji ethile (kwaye ibekwe kakuhle), kodwa ndingenazimvo kwaphela.
Ingxaki ayibhlogi, ewe. Ndinokufundwa okuninzi kwibhlog yam - kodwa andinawo ukuqhubeka kokubhala umxholo ongaguquguqukiyo kwizifundo eziqhuba uguquko kum. Kananjalo, andinalo umnxeba wokuthatha amanyathelo kwibar esecaleni.
Ndihlala ndiyilinganisa impumelelo yam ngenani lababhalisi be-RSS kunye nokuzibandakanya (ngezimvo kwibhlog yam). Ndicinga ngokutsha eso sicwangciso! Ukuba ndinqwenela ukuqhuba ingeniso kwaye ndiyisebenzise njengebhlog yeshishini, kufuneka ndijolise kumxholo wam ukuze ndiphumelele kukhangelo ngokwemiqathango efanelekileyo kwinto eqhuba umvuzo. Ndidinga ukubonelela nge indlela kwindawo yam ukuze ndibambe kwaye ndilinganise olo tshintsho.
Andikholelwa ukuba amagqabantshintshi alinganayo, kwaye ayifanelanga ukuba ngumlinganiso wempumelelo yebhlog yakho.
Ngaphandle kokuba ngandlela thile ungangqinelanisa umsebenzi nesiphumo seshishini, yinto nje engento yento. Oko akutsho ukuba andifuni zimvo… kukuba andizukusebenzisa izimvo njengesalathiso sendlela esebenza kakuhle ngayo ibhlog yam.
tags: amajelo asekuhlaleni ahambele phambiliUkusebenza kakuhleUMichael Stelzneriintlawulo mobileisantya sephephaungabhalisiwikiality
Oktobha 14, 2008 ngo-2: 25 PM
Ndifuna ukuba ngowokuqala ukuphawula ngokungabalulekanga kokunika izimvo. Iposti enkulu!
Oktobha 14, 2008 ngo-4: 40 PM
Ndiyavuma ukuba izimvo ayisiyiyo yodwa umlinganiso wempumelelo.
Kukho ithuba elikhulu lokuphuhlisa uphawu ngokubhloga. Siyinkampani yoyilo neyokwakha egxile ezicaweni. Sizahlula ngokuphuhlisa ulwazi ngakumbi kunye nokuqonda malunga nabathengi becawa kunokuba benabo. Ibhlog yethu iyasivumela ukuba sibonise olo lwazi kwaye sibandakanye amaqela eenkokeli zecawa kwiincoko ezinethemba lokuba zixhobise ngakumbi ukulungiselela ulungiselelo. Iibhloko zethu zisebenza njengenxalenye yesicwangciso sethu ukwenza ngamandla ukwenza njalo.
Ixesha liya kutyhila ixabiso elipheleleyo.